Biyya qabna jechuun nu yaaddesseera - KFO - BBC News Afaan Oromoo
Biyya qabna jechuun nu yaaddesseera, Kongirasii Federaalistii Oromoo
Mootummaan Itoophiyaas ta'ee paartiin biyyattii bulchaa jiru gaaffilee uummataaf deebii kennaa akka hin jirre paartiin Koongirasii Federaalistii Oromoo ibsa har'a miidiyaaleef kenneen beeksiseera.
Hirriirawwan tibbana adeemsifaman irratti lubbuun namaa darbuunsaa fi qabeenyi manca'uunsaa na yaaddeeseera kan jedhe paartichi mootummaan gaaffilee uummataaf xiyyeeffannaa kennuu qaba jedheera.
Akkaatuma hiriira irratti gaafatamaa tureenis, mootummaan hidhamtoota siyaasaa mara akka hiiku, buqqa'iinsi uummataa akka dhaabbatu fi kanneen dararaan irra gahee qe'ee isaanii irraa buqqaafamanis hattatamaan iddoo irraa buqqa'anitti deebi'anii akka dhaabbatan paartichi gaafateera.
Hiriirawwan tibbanaa irratti namootni aasxaa yookan alaabaa paartii koongirasii Oromoo qabatanii bahuusaanii fi taatichi fedhii KFO akka hin taane dura taa'aa itti aanaan paartichaa Obbo Mulaatuu Gammachuu himaniiru.
Paartichi namootni asxaa/alaabaa Koongirasii Federaalistii Oromoo qabatanii hiriirawwan kunneen keessatti hirmaataa turanis malaammaltoota viidiyoo waraabuun fiilmii dokimantarii hojjechuu karoorfatan ta'uusaanii ragaalee argadheeras jedheera.
Rakkoon naannoolee daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uummames "mala mootummaan gafilee uummata ukkamsuuf itti fayyadamedha" kan jedhe partichi "dhimmichi walitti bu'iinsa uummataa osoo hin taanee haleellaa humni mootummaa hidhate uummatarraan gahe dha," jedheera.
Humnoota hidhataniin uummata irraan miidhaa geessisan kanneen gama dhaabsisuutinis mootummaan gahee isa irraa eegamu akkan hin baane fi mirga uummataa kabachiisuu dadhabuusaa himan dura taa'aan itti aanaa paartichaa Obbo Mulaatuun.
22 Amajjii 2021
Viidiyoo, 'Harmeekoo sababa hanqina qorichaan dhabe'
Dubartoonni lamaan suuraa kolleejjii Kaamaalaa Haarisirra jiran eenyu?
Seeneetii duratti Doonaald Tiraampiin himachuun Wiixata eegalama jedhame
Mucaan ganna 13 'Waaqa arrabsuun' hidhamee ture bilisa ba’e
Manni Murtii iyyata dhaddacha yeroo Obbo Jawaarfaa dhiyeessan kuffise
Abbaan Alangaa himataa Obbo Jawaarfaarratti dhiyaate akka foyyeessu ajajame
Koronaavaayirasiin haguma of geeddaraa deemu ittisi isaa ni cimaa?